Uffo maxaa lagu Xidhay, Mujaahid cali Guray oo tariiikh Xus Mudan soo dhigay bartiisa fasebook | Biyoguurenews.com
Home Wararka Uffo maxaa lagu Xidhay, Mujaahid cali Guray oo tariiikh Xus Mudan...
Uffo maxaa lagu Xidhay, Mujaahid cali Guray oo tariiikh Xus Mudan soo dhigay bartiisa fasebook
UFFO MAXAA LAGU XIDHAY?
Sida aan ka qoray AHN Faysal Xaaji Jaamac oo muddo ka tirsanaan jiray aqalka wakiilada Somaliland markii dambena noqday Gudoomiyaha Maxkamada Sare kana mid ahaa qareenadii kooxda UFFO u doodayay, go’aanka maxkamaddu marka uu yahay go’aan sharci qof aan wax dembi ahi kaga cadaanin maxkamadda horteeda wax ciqaab ah laguma xukumo ee xoriyadiisa ayuu helaa. Balse marka go’aanka maxkamaddu siyaasi yahay wax kastaa way dhici karaan. Kiiskii UFFO maalintii dhegaysigu dhamaaday wuxu noo sii sheegay Garyaqaan Faysal “ ma jiro wax dembi ah oo kaga cadaaday dhalinyarada maxkamadda horteeda laakiin waxa suurtogal ah in go’aanka maxkamaddu uu noqdo siyaasi. Sidaa daraadeed wixii la doono ayaa lagu xukumi kartaa. Waa tii la ogaa xabsi daayin ilaa 20 sanadood ayaa lagu xukumay 14 ka mid ahaa lixna 8 sanadood.
Hadaba muxuu ahaa dembiga ay galeen UFFO? dad baa yidhaa warqadii istansalka lagu soo rogay ee UFFO ayaa lagu xidhay. Dad kalena waxay sheegaan samofal baa lagu xidhay oo Cisbatalka Hargaysa ay nadiifiyeen.
Aniguna si kale ayaan u arkayay oo hadal in lagu xidhay ayaaban qabay. Habeen waxa jirtay in laba wasiir oo xukuumaddii Siyaad Barre ku jiray oo labaduba ay Isaaq ahaayeen weliba midi ahaa Axmwd Silanyo oo nool ayaa guriga shaqaalaha kula kulmay dadka degaanka. Rag ka mid ahaa kooxda UFFO ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay kulankii habeenkaasi oo si cad oo badheedha tabashooyinkii jiray uga hadlay. Maalin kale Taliyihii Qaybta 26aad Janaral Gaani ayaa gurigii uu deganaa ku casumay dhalinyaro kooxda UFFO ah si ay u wada hadlaan. Maalintaasina si cad oo badheedh ahayd ayay ula hadleen. Xiliguna xiligii ahaa waa la garanayaa oo sharci keliya baa jiray oo ahaa AFWAYNE RAAC, AMA AFKAAGA HAYSO, AMA AFGOOYE AAD (Xabsiga) markaa dhalinyaradu sharciga horta ay jebiyeen ee lagu xukumay wuxu ahaa qodobkaa.
Hadaba anigu waxan qabaa hadii cashar keliya aynu ka baranay xiligii Siyaad Barre wuxu noqonayaa in aan xadhig iyo xabad midna xal u noqon karin dhibaato gudaheena ah. Casharkaa qofkii aan ka baranin aniga xagayga waa arday saaqiday oo aan waxba ka baranin wixii soo maray
Qoraalkani waxa barta Facebook- uu ku leeyahay soo dhigay Cali Guray xuquuqda qoraalkani isagaa iska leh
Previous articleDaawo, Xubno kamida Qoyskii Cigaal oo ka cabanaya dhulkoodii, Madaxwaynaha somaliland fariin u diray
Next articleDeg Deg, War hanti Dhowrka qaranka Somaliland oo Goor Dhawayd galay wasaarad warfafinta somaliland qufulayna xafiisyo badan